China Korea- KC Ọrụ na Ule | MCM
Gịnị bụ KC?
Kemgbe 25Nke Aug., 2008 ， Korea Ministry of Knowledge Economy (MKE) kwupụtara na Kọmitii Na-ahụ Maka Ihe Ọmụma Mba ga-eduzi akara ngosi nnabata mba ọhụrụ - aha ya bụ akara KC na-anọchi Asambodo Korea n'oge oge n'etiti Jul. 2009 na Dec. 2010. Nchekwa ngwa eletriki Asambodo asambodo (KC Asambodo) bu iwu nkwenye nchedo nke onwe ya dika iwu Nchedo Ngwa oru Eletriki, atumatu nke gosiputara nchekwa nke imeputa na ire ya.
Ihe dị iche n’agbata asambodo manyere ya ịchịkwa onwe ya (nke afọ ofufo) nkwenye nchekwa：
Maka njikwa nchekwa nke ngwa eletriki, asambodo KC kewara n'ime asambodo nkwado nke onwe na nke iwu (nke afọ ofufo) dịka nhazi nke ihe egwu nke ngwaahịa. A na-etinye isiokwu nke Asambodo Asambodo na ngwa eletriki nke usoro ya na usoro nke ngwa ya nwere ike ibute nsonaazụ dị egwu ma ọ bụ ihe mgbochi dị ka ọkụ, ọkụ eletrik. Ọ bụ ezie na a na-etinye akwụkwọ nyocha nke nchekwa onwe onye (nke afọ ofufo) na ngwa eletriki nke usoro ya na usoro nke itinye n'ọrụ enweghị ike ibute nsonaazụ dị egwu ma ọ bụ ihe mgbochi dị ka ọkụ, ọkụ eletrik. Na ihe ize ndụ na ihe mgbochi nwere ike igbochi site na ịnwale ngwa eletriki.
Honye nwere ike itinye akwụkwọ maka asambodo KC ：
Ndị iwu niile ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu nọ n'ụlọ na mba ofesi na-arụ ọrụ, mgbakọ, nhazi nke ngwa eletriki.
Scheme na usoro nchekwa asambodo ：
Tinye maka asambodo KC nke nwere ụdị ngwaahịa nwere ike ekewa n'ime ụdị na usoro usoro.
Iji dokwuo anya ụdị ihe nlereanya na imepụta ngwa eletriki, a ga-enye aha ngwaahịa pụrụ iche dịka ọrụ ya dị iche iche.
Certific Asambodo KC maka batrị Lithium
KC asambodo ọkọlọtọ maka lithium batrị：KC62133: 2019
Ngwaahịa KC asambodo maka batrị lithium
A. Batrị lithium nke abụọ maka iji rụọ ọrụ na obere ngwa ma ọ bụ ngwaọrụ nwere ike iwepụ
B. Cell anaghị edo onwe ya n'okpuru akwụkwọ KC ma ọ bụ maka ire ere ma ọ bụ gbakọta na batrị.
C. Maka batrị ndị eji na nchekwa nchekwa ma ọ bụ UPS (enweghị ike ịkwụsị ike), yana ike ha karịrị 500Wh karịrị akarị.
D. Batrị nke oke ume ya dị ala karịa 400Wh / L na-abata na asambodo site na 1abụrụ, Eprel 2016.
MCM nwere ezigbo mmekorita ya na ulo oru Korea, dika KTR (Korea Testing & Research Institute), KTC (Korea Testing Certification), KTL (Korea Laboratory Laboratory), ma nwee ike ịnye ihe ngwọta kachasị mma na arụmọrụ dị elu na Uru- agbakwunye ọrụ nye ndị ahịa site na isi oge, usoro nyocha, ụgwọ asambodo.
Certific KC asambodo · maka batrị lithium batrị nwere ike nweta site na itinye akwụkwọ CB ma gbanwee ya na akwụkwọ KC. Dị ka CBTL n'okpuru TÜV Rheinland, MCM nwere ike ịnye akụkọ na asambodo nke enwere ike itinye maka ntụgharị nke akwụkwọ KC ozugbo. Na oge ndu nwere ike belata ma ọ bụrụ na itinye CB na KC n'otu oge. Kedu ihe ọzọ, ọnụahịa metụtara ya ga-aka mma.
Nke gara aga: Japan- PSE
Osote: Taiwan- BSMI
Batrị Korea Asambodo
Mmanụ Mmanụ Kc 62133
Akwụkwọ Kc 62133
Kc 62133 Asambodo
Kc 62133 Ahịa Asambodo
Usoro Kc 62133 Usoro Asambodo
Ọrụ Kc 62133
Kc 62133 Na-ebute Oge
Nkwupụta Kc 62133
Kc 62133 Ule
Kc 62133 Ọnụ Ule
Ọrụ Kc 62133 Ule
Kc 62133 Oge Ule
Ọnụ Asambodo Korea
Usoro asambodo Korea
Ọrụ Asambodo Korea
Ọnụ Ule Korea
Ọrụ Ule Korea